Wafdi ka socda EU oo Maanta Garowe kula kulmay madaxda Puntland+Sawiro – SBC
Wafdi ka socda EU oo Maanta Garowe kula kulmay madaxda Puntland+Sawiro
Posted by Webmaster on July 25, 2013 Comments
Madaxweynaha Puntland Dr C/raxmaan Faroole ayaa maanta ku qaabilay Madaxtooyada Puntland ee Garoowe wafdi ka socday Midowga Yurub oo maanta soo gaaray magaalada Garoowe.
Madaxweynaha Puntland iyo wafdigan ayaa waxaa ku dhexmaray kulan madaxtooyada Puntland ee Garoowe waxaana ay ka wada hadleen arimo ay ugu weyneyd iskaashiga labada dhinac iyo ka qeyb galka shirka ka dhici doona Magaalada Brusseles.
“Puntland diyaar bay u tahay inay ka qaybgasho shirka New-Deal laakiin magaceeda ayay uga qaybgalaysaa” sidaasi waxaayiri madaxweynaha Puntland Dr Faroole isagoo faah faahin ka bixinayay waxyaabihii ay ka wada hadleen Wafdiga yimid Garoowe.
Wafdiga ayaa Garowe u yimid sidii ay wadatashi ku aadan shirka New-Deal u samayn lahaayeen ,waxana EU ay qorshaynaysaa in dib u dhisto dalalka ka soo kabanaya colaadaha iyo dagaalada sokeeye ayna ka mid tahay Somalia.
Madaxweyne Farole waxa uu sheegay in Somalia ay ka jirto baahi wayn oo u baahan tageero caalami ah sida dhismaha kaabayaashaa dhaqalaaha iyo horumarinta adeegyada bulshada oo caafimaadka iyo waxbarashadu hormuud ka yihiin.
Dhankiisa Nick Westcott oo ah Agaasimaha Africa u qaabilsan Modowga Yurub islamarkaana horkacayay wafdigan ayaa tilmaamay inay ka wada hadleen Puntland horumarka ,amaanka iyo dhinacyo kale oo ay baahi u qabto Puntland .
Dhinacyo kale oo badan ayay ka wada hadleen Kulanka dhexmaray Labada dhinac maanta, waxaana ay noqoneysaa markii ugu horeysay oo ay wafdigan yimaadaan Garoowe waxayna saaka ka soo duuleen magaalada Hargeysa xarunta waqooyigalbeed Soomaalia ,waxana duhurnimadii maanta ay dib Garowe uga dhoofeen dhanka magaalada Nairobi ee xarunta Kenya.